भारतमा आलु अत्याधिक महँगियो, कस्तो पर्ला नेपालमा प्रभाव ? – साँचो खबर
भारतमा आलु अत्याधिक महँगियो, कस्तो पर्ला नेपालमा प्रभाव ?
अर्थ खबर कृषि तथा पशुपालन
December 15, 2020 December 15, 2020 Deep Devkota
काठमाडौं। भारतमा गएको एक वर्ष भित्र आलुको मूल्यमा ११५ प्रतिशत भन्दा बढी वृद्धि भयो। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा समेत पर्दै आएको छ । त्यसैले अहिले भारतमा आलुको मूल्यमा थप बढोत्तरी हुँदा नेपालका हर भान्सामा त्यसको असर पर्ने देखिन्छ ।
भारतिय थोक मूल्यमा महँगाइको स्थाई हेर्दा नोभेम्बरमा मात्रै १.५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । सम्पूर्ण सब्जीमा देखिएको यो वृद्धिले नेपाली सब्जी बजारसमेत प्रत्यक्ष असर पर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि आलुको मूल्यमा मात्रै अत्याधिक वृद्धि भएको भन्ने तथ्यां कले देखाएपछि अब आम नेपालीका प्रत्येक छाक पहिले भन्दा निकै महँगो हेने देखिएको हो ।
नेपालमा नेपाली आलुभन्दा भारतिय आलु सस्तो मूल्यमा विक्रि वितरण हुँदै आएको छ । तर, अब भारतिय आलु नै महँगो हुने भएपछि नेपाली आलु पनि त्यसको तुलनामा अझ महँगो हुने विश्वास गरिएको छ। हुनत, नेपालको आलु अहिले नै बजारमा आउने बेला भइसकेको छैन । तर, जे जति मात्रामा नयाँ आलु बजारमा देखिन थालेको छ त्यसले नै पनि यो हिउँदमा आलु छोइनसक्नु हुने संकेत गरिरहेको छ ।
Previous: आज पशुपतिमा क्षमा पूजा गरिँदै, भोलीदेखि भक्तजनलाई खुला
Next: ‘आमालाई क्यान्सर हुँदा पनि मिलले पैसा दिएन, खेत बेचेर उपचार गरेँ’
सरकार बन्न सक्दैन भन्ने दाबी संसद बाहिर गर्ने मिल्दैन : त्रिपाठी
प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न बारका चार पूर्वअध्यक्षको अपिल